Weli Ma Is Weeydiisay Maxaa imaamka xaramka dadka looga celiyaa? Illaalo Ciiidan Ahna Loogu Sameeyay Naf Ahaantiisa..? | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada
Weli Ma Is Weeydiisay Maxaa imaamka xaramka dadka looga celiyaa? Illaalo Ciiidan Ahna Loogu Sameeyay Naf Ahaantiisa..?
Published: August 29, 2016, 8:00 pm
(0) Comments Imaamyada Masjid xaraamka iyo masjidka nabiga صلى الله عليه وسلم askar ayaa dadka ku soo yaacaya ka celisa markay masjidka galayaan niyo markay ka baxayaan. Sababtu waxaa weeye jacaylka iyo xiisaha muslimiintu u hayaan culumada gaar ahaan imaamyada xarameynka; si aanay dadweynaha qiiraysan u waxyeelayn imaamyada ayaa laga celiyaa dadka ku soo qamaamaya.
Habeen hore markii Sheekh Maxamed Cumar Dirir Muxaadarada ka jediyey Masjidka Al-nuur ee magaalada Jigjiga ayaa dadweynihii rag iyo dumarba masjidkii soo buuxdhaafiyeen oo dadka qayb dibada ku tukatay, kuwa farabadana muxaadarada ka dhagaysaneyeen banaanada iyo waddooyinka masjidka ku xeeran.
Markii Sheekhu Darsigii dhameeyey oo cishihii la tukaday ayaa dadweynihii Sheekhii ku soo qamaameen gaar ahaan dhalinyarada oo masjidka u badnaa. Waxay noqotay in mixraabka la galiyo oo dadka makarafoonka lagala hadlo inay iska baxaan, loona sheego in sheekhu soo noqon doono laakin cidna hadalkaas dhag jalaq uma siin!.
Waxaan soo jeediyey in la keno miiskii oo sheekhu intuu fuulo uu dadka kor ka salaamo oo la hadlo si ay u qancaan, laakiin Sheekha ayaa markiiba MINBARKA u baxay oo dhalinyaradii salaamay, una sheegay inuu jecelyahay, kuna faraxsanyahay kulankooda iyo isbarashadooda. Kuwo badana waxay fursad u heleen inay gacanqaadaan isaga oo kinbarka saaran. Laakiin waxaas oo dhan dhalinyaradii kuma tagin ee halkoodii ayay sii taagnaayeen.
Ugu damabyn maamulka MU”ASSASADA ALSUNNA iyo maamulka masjidka dani waxay ku khasabtaya inay sheekha sidii askartii dhinacyada ka maraan oo sidaas albaabka lagaga saaro gaarigana toos loo galiyo. Intaa kuma ekaane rag ayaaba gaariga xaggiisa sare sii buuxiyey bal si ay fursad ugu helaan markuu hotelka tago inay gacanqaadaan. Sidaas ayaana dhacday.
Waxaa is weydiin leh dadkaan maxaa keenay inay sidaa culumada u jeclaadaan?. Maxayse tusaysaa arrintaasi?. Ilaahay cidda uu jeclaado addoomadiisa ayuu jeclaysiiyaa, waana calaamad tusaysa sida dadkeenu diintooda iyo culumada xambaarsan u jecelyihiin.
Ilaahay waxaan uga baryayaa Culumada iyo ehlu khayrka jecelba inuu jannada ku kulmiyo innagana inagu daro kuwa uu jecelyahay, adoomadiisana uu jeclaysiiyey.
« Warbixinta Ka HoreysayGabar Yar Oo Habeenkii Qolkeeda Keligeed Qur’aan Ku Akhrisan Jirtay Iyo Mucjisada La Arkay Markii Aay Dhimatay..	Warbixinta Xigto »Hadii aadan xishoonayn waxaad doontid samee!. Xadiis Nabigeena Mohamed SCW Ka Sugnaaday Xambaarsana Macno Weyn.	HADAAD ISTICMAASHO FACEBOOK HALKAAN KU REEB FIKIRKAAGA	Leave a Reply Cancel reply